Man of Steel (2013) – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
PG-13 2013 143 min Super Hero
Director: Zack Snyder ရိုကျကူးတငျဆကျထားပွီးJune 14, 2013 (USA) မှာ ရုံတငျပွသခဲ့တဲ့ Super Man ဇာတျကားအသဈဖွဈပါတယျ…Super Man ဆိုတိုငျး ထူးမခွားနား ပုံစံအတိုငျးထူးဆနျးတဲ့ မိုးကောငျးကငျကနကေလြာတဲ့ လူသားလေးကို ရိုးသားတဲ့ တောသူတောငျသူ လငျမယားကမှေးစားလိုကျတဲ့ ဇတျလမျးပါပဲဒါပမေယျ့ ထူးခွားနပေါတယျ….Super Man ချေါ ခါအလျ ရဲ့ မှေးဖှားခွငျးနဲ့ သူ နထေိုငျရာ ဂွိုလျပကျြစီးခွငျးကိုတှဲမွငျရမှာဖွဈပါတယျ
ဂွိလျပွနျလညျတညျထောကျဖို့ ပငျမ သော့ကိုတော့Super Man ရဲ့ ဖခငျ ဂြိုအယျ နဲ့ မိခငျ လာရာ က သူ့သား ရဲ့ယဉျငယျကိုယျထဲကို ထညျ့သှငျးပေးပွီးတော့ကမ်ဘာဂွိုလျဆီသို့ ယဉျငယျလေးနဲ့ ပို့လှတျလိုကျပါတယျ….အရငျလို မဟုတျပဲ ထူးခွားတာကတော့ Super Man ရဲ့ငယျဘ၀ မှာ လူတှနေဲ့ အဆငျမပွနေထေိုငျခဲ့ရပါတယျကနြျောတို့ ထငျသလို ငယျစဉျကတညျးက Hero လူစှမျးကောငျးမဟုတျခဲ့ပါဘူးလူတိုငျးရဲ့ အထူးအဆနျးအဖွဈ ကွညျ့ရှုမွငျနမှေုကိုရရှိခဲ့ရတာပါ…ဒီလိုနဲ့ တဈရကျ ကြောငျးကား မတျောတဆ ဖွဈပွီး ရနေဈတဲ့အခြိနျမှာSuper Man က ရထေဲကနေ ကားကို ကုနျးပျေါပွနျတှနျးတငျခဲ့ပါတယျ..ဒါကို မွငျလိုကျတဲ့ ကြောငျးသား အခြို့က ပွနျပွောပွတော့ မှေးစားဖခငျကSuper Man ကို ချေါပွီး ဘယျသူ သသေေ ဒုက်ခရောကျရောကျအစှမျးကို ဘယျတော့မှ ထုတျမပွပါနဲ့လို့ ကတိတောငျးခဲ့တယျ…ဒီလိုနဲ့ Super Man လဲ တညျငွိမျစှာနဲ့ ဘ၀ ကို ဖွတျသနျးလာပွီးနောကျလူပြိုပေါကျအရှယျမှာပဲ မှေးစား အဖေ အမေ နဲ့ အတူ ခရီးထှကျလာရငျးလမျးတဝကျမှာ လမေုနျတိုငျး ရုတျတရကျဝငျလာပါတော့တယျ…လူတှကေို သားအမိသားအဖ သုံးယောကျလိုကျကူပွီး နရောရှပေ့ေးနတေဲ့အခြိနျမှာပဲ ကားထဲမှာ ခှေးလေး ကနျြနခေဲ့လို့ ဖခငျဖွဈသူက သှားကယျတဲ့အခြိနျမှာပဲ ခှေးလေးကို ကယျလို့ လှတျပေးအပွီး လမေုနျတိုငျးက အဲ့ဒီနရောကို ဝငျလာခဲ့ပါတော့တယျအကာအကှယျရှိတဲ့နရောကနေ ဖခငျကိုကယျဖို့ ထှကျဖို့လုပျနတေဲ့ Super Man ကို ဖခငျက ခေါငျးတဈခကျြခါပွခဲ့တယျ မလာနဲ့ သား မငျးကတိကို မငျးတညျပါ ဆိုတဲ့ အဓိပ်ပါယျတဈခု သကျရောကျနခေဲ့မှာပါ….ဒီလိုနဲ့ ဂွိုလျပကျြစီးခဲ့စဉျက ထိနျးသိမျးထားခဲ့တဲ့ သစ်စာဖောကျအကဉျြးသားတှလေဲ Super Man ရဲ့ အနံ့ကို ခံပွီး ကမ်ဘာမွပေျေါ ရောကျလာတဲ့အခြိနျမှာတော့…. ဇာတျလမျးက ပိုကွညျ့လို့ကောငျးသှားပါပွီဆကျပွောခငျြပမေယျ့ အညှနျးက ရှညျနမှောဆိုးလို့ဘရိတျပါပွီ ကနြျော အကွိုကျဆုံး Super Man ဇတျကားတဈခုပါလို့ညှနျးဆိုပါရစဗြော…
Review Credit – CM
Director: Zack Snyder ရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားပြီးJune 14, 2013 (USA) မှာ ရုံတင်ပြသခဲ့တဲ့ Super Man ဇာတ်ကားအသစ်ဖြစ်ပါတယ်…Super Man ဆိုတိုင်း ထူးမခြားနား ပုံစံအတိုင်းထူးဆန်းတဲ့ မိုးကောင်းကင်ကနေကျလာတဲ့ လူသားလေးကို ရိုးသားတဲ့ တောသူတောင်သူ လင်မယားကမွေးစားလိုက်တဲ့ ဇတ်လမ်းပါပဲဒါပေမယ့် ထူးခြားနေပါတယ်….Super Man ခေါ် ခါအလ် ရဲ့ မွေးဖွားခြင်းနဲ့ သူ နေထိုင်ရာ ဂြိုလ်ပျက်စီးခြင်းကိုတွဲမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်
ဂြိလ်ပြန်လည်တည်ထောက်ဖို့ ပင်မ သော့ကိုတော့Super Man ရဲ့ ဖခင် ဂျိုအယ် နဲ့ မိခင် လာရာ က သူ့သား ရဲ့ယဉ်ငယ်ကိုယ်ထဲကို ထည့်သွင်းပေးပြီးတော့ကမ္ဘာဂြိုလ်ဆီသို့ ယဉ်ငယ်လေးနဲ့ ပို့လွှတ်လိုက်ပါတယ်….အရင်လို မဟုတ်ပဲ ထူးခြားတာကတော့ Super Man ရဲ့ငယ်ဘ၀ မှာ လူတွေနဲ့ အဆင်မပြေနေထိုင်ခဲ့ရပါတယ်ကျနော်တို့ ထင်သလို ငယ်စဉ်ကတည်းက Hero လူစွမ်းကောင်းမဟုတ်ခဲ့ပါဘူးလူတိုင်းရဲ့ အထူးအဆန်းအဖြစ် ကြည့်ရှုမြင်နေမှုကိုရရှိခဲ့ရတာပါ…ဒီလိုနဲ့ တစ်ရက် ကျောင်းကား မတော်တဆ ဖြစ်ပြီး ရေနစ်တဲ့အချိန်မှာSuper Man က ရေထဲကနေ ကားကို ကုန်းပေါ်ပြန်တွန်းတင်ခဲ့ပါတယ်..ဒါကို မြင်လိုက်တဲ့ ကျောင်းသား အချို့က ပြန်ပြောပြတော့ မွေးစားဖခင်ကSuper Man ကို ခေါ်ပြီး ဘယ်သူ သေသေ ဒုက္ခရောက်ရောက်အစွမ်းကို ဘယ်တော့မှ ထုတ်မပြပါနဲ့လို့ ကတိတောင်းခဲ့တယ်…ဒီလိုနဲ့ Super Man လဲ တည်ငြိမ်စွာနဲ့ ဘ၀ ကို ဖြတ်သန်းလာပြီးနောက်လူပျိုပေါက်အရွယ်မှာပဲ မွေးစား အဖေ အမေ နဲ့ အတူ ခရီးထွက်လာရင်းလမ်းတ၀က်မှာ လေမုန်တိုင်း ရုတ်တရက်ဝင်လာပါတော့တယ်…လူတွေကို သားအမိသားအဖ သုံးယောက်လိုက်ကူပြီး နေရာရွှေ့ပေးနေတဲ့အချိန်မှာပဲ ကားထဲမှာ ခွေးလေး ကျန်နေခဲ့လို့ ဖခင်ဖြစ်သူက သွားကယ်တဲ့အချိန်မှာပဲ ခွေးလေးကို ကယ်လို့ လွှတ်ပေးအပြီး လေမုန်တိုင်းက အဲ့ဒီနေရာကို ၀င်လာခဲ့ပါတော့တယ်အကာအကွယ်ရှိတဲ့နေရာကနေ ဖခင်ကိုကယ်ဖို့ ထွက်ဖို့လုပ်နေတဲ့ Super Man ကို ဖခင်က ခေါင်းတစ်ချက်ခါပြခဲ့တယ် မလာနဲ့ သား မင်းကတိကို မင်းတည်ပါ ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်တစ်ခု သက်ရောက်နေခဲ့မှာပါ….ဒီလိုနဲ့ ဂြိုလ်ပျက်စီးခဲ့စဉ်က ထိန်းသိမ်းထားခဲ့တဲ့ သစ္စာဖောက်အကျဉ်းသားတွေလဲ Super Man ရဲ့ အနံ့ကို ခံပြီး ကမ္ဘာမြေပေါ် ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့…. ဇာတ်လမ်းက ပိုကြည့်လို့ကောင်းသွားပါပြီဆက်ပြောချင်ပေမယ့် အညွှန်းက ရှည်နေမှာဆိုးလို့ဘရိတ်ပါပြီ ကျနော် အကြိုက်ဆုံး Super Man ဇတ်ကားတစ်ခုပါလို့ညွှန်းဆိုပါရစေဗျာ…
Option 1 storage.msubmovie.com 678 MB SD (480p)
Option2usersdrive.com 678 MB SD (480p)
Option3yuudrive.me 678 MB SD (480p)
Option4uptomega.com 678 MB SD (480p)
Option6usersdrive.com 1.7 GB HD (1080p)
Option7yuudrive.me 1.7 GB HD (1080p)
Option 8 uptomega.com 1.7 GB HD (1080p)
Option 10 usersdrive.com4GB FHD (1080p) DTS 5.1